Mahara erection mapiritsi - 50%
Home » Mahara erection mapiritsi
Kune akawanda emakwenzi ekuwedzera pamusika nhasi izvo zvinowedzera kuita kwepabonde uye kugutsikana. Mumwe angasarudza sei kuti ndezvipi zvezvigadzirwa izvi zviri izvo zvekuyedza?
Kuedza kurongedza kuburikidza netsananguro dzakasiyana kunogona kutora nguva uye kushungurudza.
Naizvozvo, kana uchitsvaga munyika yemakwenzi ebonde zvinowedzera, zvakakosha kuti uzive ruzivo rwekutanga maererano nemishonga yemakwenzi.
Kana uchitsvaga mushonga wemakwenzi, zvakakosha kuti uwane iyo inoti inowira pasi pechikamu chemakwenzi Se anowedzera.
Se inomiririra kuburitsa kwakamisikidzwa, zvichireva kuti izvo zvigadzirwa zvinonyatso kuyerwa uye kugadzirwa kuitira kuti piritsi rega rega kana capsule ive neicho chikamu chimwe chete chezvinhu.
Mimwe mishonga yekuwedzera haipe iyi nzira inodiwa; Naizvozvo, madosi achasiyana, kunyangwe mubhodhoro rimwe chete.
Kuti uwane zvinangwa zvakadai sekuwedzera kwepenisi, kuwedzerwa kwehurume, kana kukwirisa chishuwo chebonde, kuiswa kwemakwenzi Se ekuwedzera ndiko kiyi. Nechinhu chero chipi zvacho, mhedzisiro inosiyana nekuda kwekusiyana kwemadosi anotorwa zuva nezuva.
Kana madosi achisiyana, mhedzisiro isingagadzirike yakanyanya kuoma, kana zvisingaite, kuzadzisa.
Muenzaniso wekutanga wemakwenzi Se zvinowedzerwa zvinogona kuwanikwa nekutsvaga zvekuwedzera zvakadai seVig-Rx.
Kune akawanda emakwenzi Se zvinowedzera zviripo, uye kutsvaga kuti ndeupi akakodzera pane zvaunoda ingori nyaya yekutsvaga. Maca mudzi wave mune iri kuwedzera inozivikanwa mishonga yemakwenzi yekuwedzera.
Kana yakasanganiswa neamino acids, iwo musanganiswa unozoguma kwete kwete chete zvinowedzerwa pabonde, asi zvakare zvinowedzera kugadzirwa kwemurume. Kana uchitenga mishonga yemakwenzi inowedzera, tsvaga izvo zvine izvo zviviri zvakakosha zvinhu uye edza kutsvaga imwe inopa mavitamini zvakare.
Kuwana izvo zvakanaka zvigadzirwa kubva kune yekuwedzera iyo inoshandisa yakamisikidzwa dhizaini maitiro ichaona kuti uri kushandisa yemhando chigadzirwa, zvichitungamira kune akanakisa mhedzisiro.
Paunenge uchitsvaga nezve chaiyo yekuwedzera yekushandisa, chinhu chekutanga chaunofanira kutsvaga ndechekuti izvo zvinowedzeredzwa zviri kudzidza ndezvirimwa Se zvinowedzera.
Kana zvisiri, saka usatambisa chero nguva kana mari pazviri.
Iko kune zvimwe zvakawanda zvakawandisa zvimwe zvigadzirwa zviripo zvinoratidzwa kuti zvinoshanda pasina kutambisa simba pane izvo zvinowedzerwa izvo zvinoitwa zvine zvakaderera pane zvemhando yepamusoro.
mapiritsi ekuwedzera echirume, ekuwedzera echirume akanakisa chigadzirwa, dambudziko rekumira, kuwedzerwa kuwedzera, kugadzirisa erection bonde dhiraivha, bonde capsule yevarume